Russell Crowe achichengeta yakaderera chimiro apo achidzoka muchimiro - Nhau
Kuru Varaidzo Blog Macelebs Style
Russell Crowe achichengeta yakaderera chimiro apo achidzoka muchimiro
Russell Crowe anga achinyanya kuvanda iye achidurura huremu, maererano neshumo nyowani.
ANGELA WEISS / AFP kuburikidza neGetty Mifananidzo
Iyo 'Gladiator' nyeredzi yanga isingazivikanwe kunonoka sezvo akaunganidzwa kumabasa akati wandei, kusanganisira yake yeGolden Globe-kukunda kuratidzwa kwaRoger Ailes mu 'Izwi Rakanyanya.' Akarongedza zvakare pamapondo emutambo unouya 'Unhinged.'
Iko kurema-kurodha mabasa apera.
Kwayedza inotaurira Peji Yechitanhatu kuti mutambi anokunda Oscar-arikugara ari pasi-chimiro paanenge ari muchimiro
Chikonzero hapana munhu akaona Russell mune imwe nguva ari kudya. Anoda kubuda mushure mekunge muviri wake wataridza zvirinani, 'akadaro masosi. 'Akanyadziswa neaya mafoto ake aine dumbu kunze ... Anofarira kudya. Anodya akawanda steaks uye junk chikafu. Zvakaoma kwaari kuti achinje magiya ave nehutano hupenyu. '
Panguva iyo kunze kweziso reruzhinji, Russell akasvetuka iyo Globes mwedzi wapfuura kugara muAustralia apo moto wemusango wakaparadza nyika. Ndichiri kutaura naAussie redhiyo 'Fitzy & Wippa,' akatsanangura maratidziro aaiita kuhwina kwake.
julia roberts achiri mucheche
'[Ndakanga ndine] kudya kwemanheru kwemhuri musango, vana kwese kwese. Takapfuura tichitenderedza Golden Globe yangu kubva ku'Pfungwa Dzakanaka 'uye munhu wese akawana mukana wekutaura,' akadaro. 'Ino nguva yegore, zvakandiomera kuti ndiite zvinhu izvozvo.'
Mwanasikana waAnna Nicole Smith, ane makore gumi nemaviri, anopfeka ngowani yaamai kunonoka kuDerby
Mhuri yose yaKardashian haina kuteedzera Larsa Pippen pa Instagram
john cena na nikki vanoputsa
gava neshamwari vanobata kurambana
olivia newton john kuvhiya kwepurasitiki